Mohamed Salah: ‘Dib ugu laaban maayo Chelsea waana u sheegay… | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mohamed Salah: ‘Dib ugu laaban maayo Chelsea waana u sheegay…
Mohamed Salah ayaa sheegay inuu qorsheystay inuusan mar danbe dib ugu laaban kooxda Chelsea marka uu dhamaado waqtiga sida amaahda ugu ciyaarayo naadiga Fiorentina oo ku eg dhamaadka xili cayaareedkan.
Mohamed oo 22-sano jir u dhashey dalka Masar ah ayaa kooxda Serie A ka dhisan ee Fiorentina si deeyn ah ugu biirey habeenkii ugu danbeeyay ee uu xirmayey suuqa iibka,isagoo halkaasi kasii ciyaari doona ilaa bisha June 2015.
Salah ayaa saxiixiisa naadiga Viola ee uu kaga sooo tegey Stamford Bridge qeyb ka ahaa Iibsiga Juan Cuadrado‘ oo tababare Jose Mourinho la wareegay.
Inkastoo sida sharciga ah,milkiyadda xidigan khadka dhexe ay leedahay Chelsea, ayaa hadana Salah wuxuu noqon waayey dooqa koowaad ee xidigaha garoonka ku bilaabo Mourinho, waana sababta uu u diidayo inuu kusoo laabto naadiga hogaaminaya Premier League.
sida laga soo xigtay wargeyska The Express, Salah ayaa shir-jaraa’id ku sheegay: “Xiligaan ma qorsheynayo inaan dib ugu laabto Chelsea.waxaan doonayaa inaan aad isugu muujiyo Fiorentina. Waan la hadley Mourinho waana u sheegay inaan doonayo inaan isaga tago Chelsea wuuna iga aqbalay midaasi.”
Salah, ayaa aad loola xiriirinayey naadiga Liverpool, kahor inta aysan Chelsea sanadkii hore ka keenin Basel.